Webiga Nile: Maxay tahay xulafada cusub ee Afrika ee Masar | Xaysimo
Home War Webiga Nile: Maxay tahay xulafada cusub ee Afrika ee Masar
Webiga Nile: Maxay tahay xulafada cusub ee Afrika ee Masar
Xiriirro ganacsi oo adag unbaa lagu gaari karaa wax ka badan wixii lagu gaari lahaa maquunin milateri
Isbadelka ku yimid jihaynta iyo diiradda siyaasadda arrimaha dibadda ee Masar ee ku aaddan dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika ayaa sidaas daraadeed waxa uu ku yahay mid lala soo daahay, hasayeeshee, qaar ka mid ah dadka Masar ayaa waxa ay qabaan in waqti badan uusan tegin.
“Siyaasadaha casriga ah markii la eego awooddu ma ahan hubka iyo madaafiicda,” waxaa sidaas ku doodaya Walaa Bakry, oo ah aqoonyahan ka tirsan Jaamacadda Westminster ee UK kana talabixiya arrimaha ganacsiga.
“Heshiisyada ammaanka eel ala galayo qaar ka mid ah dalalka uu maro Webiga Nile sida Burundi, Rwanda ama Uganda waa arrin wanaagsan, hasayeeshee Masar ma siin doonto awoodda ay u baahan tahay,” ayuu qoray.
Xiriirro ganacsi oo adag ayaa lagu gaari karaa wax ka badan wixii lagu gaari lahaa maquunin milateri, ayuu ku dooday, isagoo soo hadal qaaday ganacsiga kooban ee Masar kala dhaxeeya sagaalka dal ee uu maro Webiga Nile.
“Ma jiro qof oranaya Masar waa inay dalalkaas ka soo iibsataa wax aanay u baahnayn. Hasayeeshee tusaale ahaan, dalalka uu maro Webiga Nile waxa ay soo saaraan kafee tayadiisu ay aad u sarrayso – Masarna waxa ay sanadkiiba kafee soo siisataa $95.5m, 95% waxa ay kala timaadaa meel ka baxsan qaaradda Afrika.
Dhanka kale, dareenka waddanka Masar ayaa waxa uu sii noqonayay mid ay cadaawad ku dheehan tahay. Maamulka Masar, madaxweynaha laf ahaantiisa, ayaa waxaa haysta cadaadis ballaaran oo ah in Itoobiya uu si adag ula dhaqmo.
Xitaa taageerayaasha Cabdulfataax Al-Sisi ayaa waxa ay bilaabeen inay si hoose ugu sheekaystaan wax aanan laga fakari karinba – guuldarrada ilaalinta xuquuqda biyaha Masar inay ka dhigan tahay inuusan xaq u yeelan doonin inuu dalka maamulo Sisi.
Masar ayaa waxa ay rajaynaysaa in dhisidda xulufo ku xeeran Itoobiya ay miro dhali doonto haddii ay laga maarmaan ay noqoto inay dagaalamaan dalkaas.
Masar iyo Suudaan ayaa waxa ay muranka biyo-xireenka geeyeen Golaha Ammaanka ee Qaramad Midoobay, iyagoo ka baaraandagaya suuragalnimada ah inay waxyeelayso nabadda iyo deganaanshiyaha gobolka.
Arrintaas ayaa waxaa hore loo geeyay Golaha Ammaanka, markaas oo dib loogu soo celiyay Midowga Afrika, kaas oo ku guuldarraystay inuu xal gaaro.
Qaahira iyo Khartuumba waxa ay arrintaas ku eedaynayaan Itoobiya, halka Addis Ababa ay Masar ku eedaynayso inay wadahadallada u adeegsanayso farsamo ay ku sii wadato siyaasaddeeda ay sida wax ku oolka ah ugu maamusho biyaha Masar – taas oo tixraac u ah saamiga libaaxa ee ay Masar ka hesho biyaha.
Dhoolatuska milateri ee ay wadajirka u sameeyeen Masar iyo Suudaan ee dhawaan lagu qabtay Suudaan ayey iskacaddahay in looga gol-leeyahay in Itoobiya oo kaliya aanan digniin loogu diraynee balse ay caalamka oo dhan ku wajahnayd – iyo in labadaasi dal aanay ka gabbanayn inay awood milateri wax ku maquuniyaan haddii loo baahdo, oo arrinta biyaha ay u tahay mid nolol iyo geeri u dhaxaysa.
Heshiisyada Masar ee iskaashiga milateri ee ay la gashay Uganda, Kenya iyo Burundi ayaa u muuqanay mid farriintaas lagu sii kabayo, walow ay adag tahay in dalalkaas ay ogolaadaan inay galaan dagaal gobolka ka dilaaca iyadoo aanay halis ku jirin danahooda muhiimka ah ee qaranka.
Haddii ay gabi ahaanba guuldarraysato diblumaasiyadda, waxaanan shaki ku jirin in dadweynaha Masar ay taageeri doonaan tallaabo milateri waa haddii arrintaas loo baahdee.